China Floor misy marika famindrana luminescent taratasy / jiro marika Luminescent tselatra ho an'ny orinasa mpamonjy voina sy mpamokatra | Maloto be
Fanamarihana mpitari-dàlana manjelanjelatra fanoratana misy gorodona Ny vatan-javamaniry manjavozavo vita amin'ny matihanina dia vokatra manjelanjelatra matihanina izay azo ampiasaina ho famantarana ny fiarovana sy ny rindran-trano. Ny fampiharana ny faritra samihafa dia mety ho eo amin'ny rindrina, gorodona, tohatra ary asan'ny zavakanto amin'ny galeriy. Ny ankamaroantsika amin'ny seram-bary marevaka dia mifanentana amin'ny fananganana izay mampifangaro ny fomba fiasa nentin-drazana miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny. Izy ireo dia mampiseho ny vokatry ny jiro maharitra, antiseptika, mateza ary fahamarinan'ny simika. Taorian'ny a ...
Fanamarihana mpitari-dàlana marevaka vita amin'ny gorodona
Fanamarihana fivoahana luminescent mipetaka amin'ny gorodona
Jiro seramika marevaka dia vokatra manjelanjelatra matihanina izay azo ampiasaina ho famantarana ny fiarovana sy ny haingon-trano. Ny fampiharana ny faritra samihafa dia mety ho eo amin'ny rindrina, gorodona, tohatra ary asan'ny zavakanto amin'ny galeriy. Ny ankamaroantsika amin'ny seram-bary marevaka dia mifanentana amin'ny fananganana izay mampifangaro ny fomba fiasa nentin-drazana miaraka amin'ny teknolojia ankehitriny. Izy ireo dia mampiseho ny vokatry ny jiro maharitra, antiseptika, mateza ary fahamarinan'ny simika. Aorian'ny fitrandrahana hazavana hita maso sahala amin'ny hazavan'ny masoandro mivantana mandritra ny 10-20 minitra, ary mikosoka tsy tapaka mandritra ny 8 ora ~ 12 ora. ny vokatra dia tsy vitan'ny haingo ihany no tanjona fa ny fiarovana ihany koa.
1.Ny seramika sary malotocent dia vita amin'ny alàlan'ny fampidirana pigment luminescent sary amin'ny fizotran'ireo seramika mahazatra sy fitaratra mahazatra. Raha ampitahaina amin'ny seramika sy fitaratra mahazatra, ny vokatra dia afaka mamirapiratra ao anaty haizina taorian'ny setroka ny jiro hita maso, izay mahatonga be seramika sy fitaratra mampiasa betsaka.
2.Ny akora misy ny seramika maloto sary dia afaka mandrehitra jiro hita maso isan-karazany, mandra-pahafoana, avy eo afaka mamirapiratra ao anaty haizina tsy tapaka, fampiasana tsy misy fetrany tsy manam-petra, jiro avo avo, izay avo folo heny tsara amin'ny akamainty mahazatra. Ny fitaovana dia maimaim-poana amin'ny radioactivity, nontoxic ary tsy mampidi-doza.
3. Ny jiro hazavana vonjy taitra maivana dia afaka mitarika ny olona hialana amin'ny filaminana ka tsy mihetsika intsony ary mampihena ny fisavoritahana ankoatry ny fitahirizana angovo.
4. Ny fampiharana ny seramikitry ny sary luminescent ao amin'ny trano an-trano sy ny tranom-panjakana dia tsy vitan'ny hoe manatsara sy manatsara ny trano sy ny toeram-piasana, fa afaka mitondra fahatoniana bebe kokoa ho an'ny mponina miaraka amin'ny hazavana ao anaty haizina ihany koa.
5.Ny seramika mazava ho an'ny sary dia afaka mamoaka onja maivana, izay afaka manakana karazana ratra sy aretina. Ity toetra amam-panahy ity dia mifanaraka amin'ny ideolojia maoderina sy salama ho an'ny olona maoderina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny vokatra any an-dakozia sy efitrano fandroana.
6. Ny seramikin-tsary luminescent dia porofo manamarina, fanoherana ny ady, famonoana afo, fanoherana ny fahanterana ary tsy azo atao amin'ny radioactivity raha ampitahaina amin'ny fitaovana manjelanjelatra organik hafa, izay ampiasaina betsaka any an-trano sy tranom-panjakana.
Previous: Siri-teny mamirapiratra maintso haingana
Manaraka: pig-Photoluminescent fanentanana rano